मनोरञ्जन – Page 76 – BIG FM 101.2 MHz
Home » मनोरञ्जन (page 76)
नायक आर्यन सिक्देल र सपना भण्डारी बैबाहिक बन्धनमा
हिम्मतवाली फ्यान जसले फ्यानको रुपमा मात्र नभई जीवन साथीको रुपमा आर्यन सिग्देललाई अपनाउन खोजेपछि ती फ्यानको सपना पुरा भएको छ । नाम उनको सपना अनि पुरा नहोस पनि कसरी ? चार बर्षदेखिको प्रेमले बैधानिक रुपमै विवाहको मान्यता पाएपछि संसारकै सबै भन्दा खुशी महसुश गरेकी होलिन आज सपना भण्डारीले । पछिल्लो समयका स्टार आर्यन सिग्देलकी फ्यान सपना जो जोरपाटीमा बस्छिन उनैसंग …
बलिउड नायक भन्छन- ‘नेपालका डाँडामा घर बनाएर बस्न पाउँ’
बलिउड नायक अर्सद वार्सी हालै मात्र नेपाल भ्रमण गरि फर्किएका छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पदयात्राका लागि आएका उनले १५ दिन नेपालमा बिताए । नेपाल आएकै दिन उनले मिस नेपाल २०१४ का प्रतिस्पर्धीसँग अन्तरक्रिया गर्नु बाहेक खासै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।अमेरिकामा हुन लागेको आइफा अवार्डमा सहभागी हुन फर्किन लागेका वार्सीले दि हिमालयन टाइम्स दैनिकसँग कुरा गर्दै नेपाल भ्रमण अविस्मरणीय रहेको …
पोखरामा नाटक ‘अर्को ओरालो’ मञ्चन हुने
रेम बिक पोखरा, १ बैशाख । नाटक ‘अन्तराष्ट्रिय रक्सी भट्टी’ मञ्चनको एक वर्ष पछि यूथ क्रियशन थिएटर पोखराले अर्को नाटक मञ्चनको तयारी थालेको छ । थिएटरले मञ्चन गर्न लागेको नाटक ‘अर्को ओरालो’को लागि यतिबेला कलाकार छनौट कार्य भैरहेको छ । थिएटरले नयाँ वर्ष २०७१ को अवसर पारेर नाटक ‘अर्को ओरालो’ को घोषणा गरेको हो । ‘पोखरेलीहरुको नाटकप्रतिको विशेष चासो र चाहनाअनुरुप …
सेलिब्रेटी विवाह प्रसंग-२०७०
वर्ष २०७० मा ग्ल्यामर क्षेत्रमा स्थापित र चर्चित केही व्यक्तित्व वैवाहिक जीवनमा बाँधिए। वर्ष २०७० को पूर्वाद्धमा गायिका सरु पराजुली तथा गीतकार शिव चम्लागाईं ‘कालु’ विवाह-बन्धनमा बाँधिए भने गायक अमृत क्षेत्रीले संगीता ताम्राकारसँग वैवाहिक जीवन शुभारम्भ गरे। यसैगरी गायक एवं संगीतकार सशान कँडेलले सर्वाणी पाण्डेलाई दुलहीका रूपमा घर भित्र्याए। चलचित्र ‘स्वर’ मार्फत नायकका रूपमा डेब्यु गरेका यशराज गराचले यसै वर्ष …
रेखा, केकी, गरिमा, यी हुन् बर्षका सफल नायिका ?
चैत २८ गते / यो बर्ष नायिकाहरुको स्टारडम बिक्यो । पर्दामा नायक भन्दा ज्यादा नायिकाहरु नै हाबी बने । जसका कारण पनि पुरुष प्रधान सिनेमा बन्ने नेपाली सिने बजारमा नायिका केन्द्रित चलचित्रले स्थान पायो । यो बर्ष व्यापारका हिसाबले कम सिनेमा चले । जसका कारण पनि व्यापारिक रुपमा नायिकाहरुको स्टारडम र कामलाई मुल्यांकन गर्नु जायज देखिदैन । केही नायिकाहरु अभिनय …
शिव रेग्मीको अन्तिम सिनेमा ‘मनले मनलाई छुन्छ’
चैत २८/ शुक्रवारबाट नेपाली सिने बजारमा चलचित्र ‘मनले मनलाई छुन्छ’ प्रदर्शनमा आएको छ । शिव रेग्मीको अन्तिम सिनेमा भनेर प्रंचार गरिएको चलचित्रमा गरिमा पन्त र बिरेन श्रेष्ठको मर्मस्पर्शी प्रेमकथा देख्न पाइनेछ ।‘मनले मनलाई छुन्छ’का गीतसंगीत प्रदर्शन अगावै चर्चामा आइसकेका छन् । यसैले पनि हलमा यो चलचित्र हेर्न दर्शक ओइरिने आँकलन गरिएको छ । चलचित्रलाई सुनिल सिटौलाले निर्माण गरेका हुन् ।चलचित्र …
आर्यनको बिहेमा नम्रता खुसी
आगामी वैशाख १२ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म नोभेम्बर रेनको मंगलबार गीति एल्बम सार्वजनिक गरिएको छ। आर्यन र नम्रताको उठबसले भने सबैमा शुरूबाटै उत्सुकता जगायो। नम्रता कार्यक्रमका लागि ढोकाभित्र छिर्न नपाउँदै तस्वीरका लागि पोज दिन थालेकी थिइन्। यत्तिसम्म ठिकै थियो तर सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै कार्यक्रमको मध्यभागमा आर्यन र नम्रता एक साथ बाहिरिए र केही मिनेटको अन्तरालपछि भित्रिँदा झनै उत्सुकता थपियो। …
एक महिनामा सकियो ‘नाईके’
पोखरा, १५ चैत । ग्याङस्टारहरुको कथा बोकेको नेपाली फिल्म ‘नाईके’को छायाँकन सकिएको छ । तीस दिनमा फिल्मको छायाँकन सकिएको हो । फिल्मको सम्पुर्ण छायाँकन पोखरा र आसपासमा भएको निर्माणपक्षले जानकारी दिएको छ । फिल्म ब्ल्याक स्याडो प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण भएको हो । फिल्ममा लभरब्वाई आर्यन सिग्देल ग्याङस्टार ‘नाईके’को रुपमा देखिएका छन् । त्यस्तै रेम बिक, बोधराज रेग्मी र विजयराज सेन्चुरी …